သင်၏ဝဘ်ဆိုက်ကဲ့သို့လှပသောကုန်ပစ္စည်းအဆိုပြုချက်များကိုတည်ဆောက်ပါ Martech Zone
စံနမူနာပြကုန်အမှတ်တံဆိပ်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့မှအဆိုပြုလွှာနှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။ စာရွက်စာတမ်းများ, သို့သော်တစ် ဦး ဘေးအန္တရာယ်ရှိကြ၏။ နယ်နိမိတ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပရင်တာချိန်ညှိချက်များထက်ကျော်လွန်သည်။ အပိုင်း ၂ ပိုင်း (ပုံနှိပ်ခြင်းအလုပ်နှစ်ခု၊ လက်မှတ်နှစ်ခု) ရှိသည်။ လက်မှတ်ထိုးထားသောအဆိုပြုလွှာကိုပြန်ပုံနှိပ်၊ စကင်ဖတ်စစ်ဆေး၊ အီးမေးလ်ပြန်ပို့ရသည်။ ပိုဆိုးသည်မှာအဆိုပြုချက်သည်စာဖတ်ရန်ခက်ခဲပြီးရေးသားထားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ခြေရာခံရန်၊ တည်းဖြတ်ရန်နှင့်ကုမ္ပဏီအတွက်ဗားရှင်းများစွာနှင့်ပြန်လည်ထွက်ခွာရန်လိုအပ်သည်။ ဟုတ်ပြီ၊ အချိန်ဖြုန်းတာပဲ
လှပသောဆိုက်နှင့်စာရွက်စာတမ်းများပါသောအမှတ်တံဆိပ်အတွက်သူတို့သည်အသုံးမပြုခြင်းကိုအံ့သြမိသည် branded အဆိုပြုချက်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက် ကဲ့သို့ TinderBox သူတို့၏အဆိုပြုချက်များကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ရန်၊ ဖတ်ရန်၊ တည်းဖြတ်ရန်နှင့်လက်မှတ်ထိုးရန်လွယ်ကူစေရန်။ TinderBox ဒီဘလော့ဂ်ကိုကမကထပြုသူဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အဆိုပြုချက်များကိုပေးပို့ရန်နှင့်ဖောက်သည်များအနေဖြင့်လည်းအသုံးပြုသည်။ တကယ်တော့၊ ငါတို့လုပ်မှာပေါ့ API ပေါင်းစည်းမှု ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူ စပွန်ဆာပေးသောအဆိုပြုလွှာများ လူတွေဟာငါတို့ရဲ့လက်ချောင်းကိုမြှောက်စရာမလိုပဲကိုယ်ပိုင်အဆိုပြုချက်တွေရနိုင်အောင်! (မှတ်ချက်။ Salesforce အသုံးပြုသူအနေဖြင့် TinderBox သည်၎င်းတို့ကိုတစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည် Appexchange အဆိုပြုချက်ဖြေရှင်းချက်!
စိတ်ကြိုက်ရန်အလို့ငှာ TinderBoxသူတို့သည်သင်၏ TinderBox အခင်းအကျင်းကိုအသစ်ပြောင်းရန်နှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရလေ့ရှိသော်လည်း…တော့မဟုတ်ပါ။ ယခု TinderBox သည်သူတို့၏ပလက်ဖောင်းအတွင်းစိတ်ကြိုက်အပြည့်အစုံထည့်သွင်းထားသည်။ သူတို့မှာသင့်ရဲ့နှလုံးသားအကြောင်းအရာအတွက်သင်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်တဲ့စံသတ်မှတ်ချက် ၆ ခုရှိတယ်
အကောင်းဆုံးကတော့နာရီနှင့်တူသောကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက်ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများစွာရှိသည် မျိုးစုံအဆိုပြုချက်ကို themes များဖန်တီးနှင့်စိတ်ကြိုက် သူတို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းအတွင်းပြီးတော့အဆိုပြုချက်ကိုလျှောက်ထား။ ဒါကြောင့်ငါတို့မှာaရှိနိုင်တယ် Martech Zone အကြောင်းအရာနှင့်က Highbridge ခေါင်းစဉ်!
အဆိုပြုချက်အခင်းအကျင်းတစ်ခုစီတွင်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သောအင်္ဂါရပ်များစွာရှိသည်။ အားလုံးသည်မောက်စ်ပေါ်တွင် နှိပ်၍ အကောင်အထည်ဖော်ရန်ဖြစ်သည်။ အပိုဆောင်းအဆိုပြုလွှာအခင်းအကျင်းစိတ်ကြိုက်လိုအပ်သောကုမ္ပဏီများအတွက်အဆင့်မြင့်ရွေးချယ်စရာများကိုကလစ်တစ်ချက်တည်းနှင့်ရနိုင်သည်။
သင်ပြီးပြီဖြစ်သောထုတ်ကုန်ကိုကြည့်လိုပါက TinderBox's ကိုစစ်ဆေးပါ 2013 ခုနှစ် Benchmark လေ့လာမှု: B2B အရောင်းအဖွဲ့အစည်းများအတွက်အရောင်းအဆိုပြုလွှာထိရောက်မှု။ သူတို့ကအသုံးပြု။ အစီရင်ခံစာတည်ဆောက်ခဲ့သည် TinderBoxနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်တုန့်ပြန်အီးမေးလ်များကိုစိတ်ကြိုက်နှင့်အလိုအလျောက် ရောင်းသူနှင့်ရန်အပြန်အလှန်တွန်း Salesforce။ လှသောအဆင်း!
Tags: အမှတ်တံဆိပ်အဆိုပြုချက်ကိုbranded အရောင်းအဆိုပြုချက်ခွင့်လွတ်အဆိုပြုချက်အလိုအလျောက်အဆိုပြုချက်တံဆိပ်အဆိုပြုချက်ကိုဆောင်ပုဒ်အဆိုပြုချက်ခေါင်းစဉ်များအရောင်းအဆိုပြုချက်ရောင်းသူရောင်းသူမင်္ဂလာပါ
ActiveConversion: ဝက်ဘ် itors ည့်သည်များကိုစစ်ဆေးပြီးခြေရာခံ